किन स्थायी बन्ध्याकरण गर्न मान्दैनन् पुरुषहरु ? - Himalaya Post
किन स्थायी बन्ध्याकरण गर्न मान्दैनन् पुरुषहरु ?
Posted by Himalaya Post | १६ असार २०७६, सोमबार १३:३२ |
बागलुङ – बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका–५ खुंखानीकी २९ वर्षीया नरदेवी सिर्पाली स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा भेटिइन् । सन्तानको रहर पुगेपछि एक वर्ष पहिले हातमा लगाएको इम्प्लान्ट निकाल्न उनी खुंखानी स्वास्थ्य चौकी पुगेकी हुन् ।
एक छोरा र दुई छोरीकी आमा उनले परिवार नियोजनको अस्थायी साधनहरु प्रयोग गर्दै आएकी छिन् । एक वर्ष पहिलेसम्म डिपो सुई लगाउने गरेकी उनले इम्प्लान्टको प्रयोग गरेको एक वर्ष मात्रै भयो । स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार उनले इम्प्लान्ट लगाएकी हुन् । नरदेवीले दुई सन्तान मात्रै जन्माउने भन्दाभन्दै तीन सन्तान भए । नरदेवीले तेस्रो सन्तान जन्मेपछि श्रीमान्लाई स्थायी बन्ध्याकरणका लागि अनुरोध गरिन् तर उनले मानेनन् ।
नरदेवी जस्तै खुंखानी स्वास्थ्य चौकीको सेवा क्षेत्रमा रहेका झण्डै डेढ सय महिलाले परिवार नियोजनको अस्थायी साधन प्रयोग गर्छन् । पुरुषले बन्ध्याकरण गर्न नमानेकै कारण परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको भर गर्दै आएको नरदेवी बताउँछन् । खुंखानी स्वास्थ्य चौकीको तथ्याङ्कअनुसार अहिले पनि २२ महिलाले पिल्स, ४१ ले डिपो र ५९ ले इम्प्लान्ट नियमित प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
स्वास्थ्य चौकी प्रमुख दीपक पौडेलका अनुसार कण्डम प्रयोग गर्नेको भने स्वास्थ्य चौकीले तथ्याङ्क राखेको छैन । त्यो बाहेक निजी स्वास्थ्य क्लिनिक र अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सेवा लिनेहरु पनि छन् । खुंखानीका महिलाहरुमा दुई सन्तान मात्रै जन्माउनु पर्छ भन्ने चेतना छ । दुईभन्दा धेरै सन्तान नपाउनका लागि उनीहरु आफैँ अनेक उपाय लगाउँछन् । घाँस दाउरा गर्दा होस् वा मेलापात गर्दा एक अर्कामा जानकारी गराएर महिलाहरुकै बीचमा परिवार नियोजनका विषयमा जानकारी आदानप्रदान हुने गरेको स्थानीय आशकुमारी सिर्पालीले बताइन् ।
स्वास्थ्य चौकीले बेला बेलामा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बन्ध्याकरणका विषयमा जानकारी गराउने गरेको छ । “हामीले स्थायी बन्ध्याकरण गर्दा कुनै असर पर्दैन भनेर जानकारी गराइरहेका छौँ ।”, स्वास्थ्यचौकी प्रमुख पौडेलले भने, “यहाँ त महिलाहरुले नै श्रीमान् कमजोर हुन्छ, काम गर्न सक्दैन भनेर आफैँ बन्ध्याकरण गर्न आउने गरेको पनि पाएका छौँ ।” परिवारको आकार सानो बनाउन स्थानीय सबैमा चेतना भएको भएपनि बन्ध्याकरणका विषयमा केही गलत धारणा रहेको पौडेलले औँल्याए। रासस
Previousभारतले इङ्ल्याण्डविरुद्ध जानीजानी हारेको हो ? लाग्यो म्याच फिक्सिङको आरोप
Nextनिगमप्रति प्रधानमन्त्रीको आक्रोश : गन्तव्य कहाँ हो थाहा छैन, वाइड बडी किनेको छ
बिजुली चोरी: चोरी गर्ने बाजे, कारबाही भोग्ने नाति !
११ कार्तिक २०७५, आईतवार ०८:३१
९ माघ २०७५, बुधबार ०९:०८
गाउँकै एक्ला एसएलसी उत्तीर्णको पछुतो, ‘छोरीलाई तीन कक्षामाथि पढाउन सकिनँ ।’
२६ भाद्र २०७४, सोमबार १०:०४
सिंहदरबारबाट निस्कने दिसापिसाब प्रशोधन गरी त्यतै पुन: प्रयोग गरिने
३ चैत्र २०७३, बिहीबार १०:१३